आलु कसले खान मिल्छ ? कसले मिल्दैन ? सबैले थाहा पाउनुपर्ने यस्तो छ गज्जबको तथ्य — Sanchar Kendra
पानी पालकका फाइदा
पानी पालक नेपालका लागि कुनै नौलो सब्जी होइन। नेपाली नभएता पनि नेपाल भित्रिएको धेरै बर्ष भइसकेको छ।फिलिपिन्समा अत्यधिक खेती हुने गर्दछ यो साग।यो साग बिस्तारै संसार भरी छाएको छ। सागको रुपमा भुटेर या आलुमा मिसाएर तरकारी बनाएर पनि हामी पानी पालक नियमित खाइ नै रहेका हुन्छौं। नियमित रुपमा खान सकेमा पानी पालकले स्वस्थ्यका लागि कयौं फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ।
पानी पालकका फाइदाहरु
ग्लुटिन फ्री खाना भएकाले सबैका लागि फाइदाजनक मानिन्छ। गर्भवतीका लागि राम्रो सब्जी पानी पालक हो। पानी पालकले भोक जगाउने काममा निकै मद्दत पुर्याउछ। तनाव कम गर्न मद्त पुर्याउछ।
मस्तिक सम्बन्धी समस्या निदान गर्नुका साथै सम्झना शक्तीमा उल्लेख्य फाइदा पुर्याउछ। बढ्दो उमेरका बच्चाको लागि पनि उपयोगी मानिन्छ।
सिस्नोले मुटुसम्बन्धी समस्यालाई निको पार्नका लागि सहयोग गर्छ। यो मधुमेह रोगीका लागि पनि निकै उपयोगी हुन्छ। सिस्नो गर्भवती तथा सुत्केरीलाई समेत खुवाइन्छ। उनीहरुका लागि सिस्नो अति फाइदाजनक मानिन्छ। उच्च रक्तचापको समस्या छ भने पनि सिस्नोको सेवन गर्दा हुन्छ। यसले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्नमा सघाउ पुर्‍याउँछ।
सिस्नो जति काट्यो त्यति पलाउने भएकाले खेती गरे पनि लाभ उठाउन सकिन्छ। यसलाई तारे होटेलदेखि विदेशमा समेत बिक्री गर्न सकिन्छ। औषधिको प्रयोजनका लागि सिस्नोको अत्यधिक माग हुने भएकाले यसलाई विदेश निर्यात गरेर आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ।